Soo dejisan PhotoTrip 2.0.1.2315 – Vessoft
Soo dejisan PhotoTrip
PhotoTrip – software ah in ay la shaqeeyaan images iyo abaabulo gallery photo guriga. software The u saamaxaaya in ay kala soocaan images by albums, oo u arkaan sawiro by taariikhda keydinta iyo yeero meelaha booqday on map-ka. PhotoTrip ku jira set oo ah qalab si astaysto tayada image iyo rogi kala duwan ee saamaynta. Sidoo kale PhotoTrip kuu ogolaanayaa inaad si ay u daabacaan images ku saabsan adeegyada caanka ah iyo shabakadaha bulshada, sida Facebook, Instagram, Flikr, VK oo kale.
set Great qalabka iyo saamaynta
Bixinta by albums
Meelaynta of photos on map-ka
Isku dhex leh shabakadaha bulshada
Comments on PhotoTrip:
PhotoTrip Software la xiriira:
Photo Editor xoogbadane ay la socdaan qalab inay la shaqeeyaan images. Software ka kooban yahay qaabka uu u qaado soo koobin lagama maarmaanka u ah natiijada si mug leh.
XnView 2.37 Standard, Extended iyo Minimal
Photo Tuul arkaan oo la shaqeeya sawiro files. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad codsato saamaynta kala duwan oo aanay files si qaabab loo jecel yahay.
العربية, English, Українська, Français... FastStone Image Viewer 5.9
Photo software The si aad u eegto, edit iyo badalo sanamyadii. software The taageertaa qaabab waaweyn graphic iyo leedahay hawlaha badan oo kala duwan.
English, Українська, Français, Español... GIMP 2.8.18
Photo qalab A awood badan si ay ula shaqeeyaan images. software waxay leedahay set badan oo ah qalab si ay u abuuraan, edit iyo ka koobanahay sanamyadii.
العربية, English, Українська, Français... Picasa 3.9.141.259
Photo Software si ay u maareeyaan ururinta ee photos iyo qalabka video. Sidoo kale software ka bixisaa fursadaha ah goobidda iyo ballaaran oo fudud si loo farsameeyo files.
العربية, English, Українська, Français... IrfanView 4.42
Photo editor The image garaafyada la set buuxda oo qalab ah si loo farsameeyo sawirada. software waxa uu leeyahay saamayn iyo filtarrada kala duwan.
Photo Editor ayaa graphic iyadoo balaadhan oo ah functionalities. Software ayaa ku siinayaan shaqada oo mashaariic ka fudud ama mid kakan oo awood u siineysaa inay iyaga ku badbaadin qaabab kala duwan.
English, Українська, Русский, Bahasa Indonesia
ProShow Producer 7.0.3527
Photo Software waxay abuurtaa a soo duubey xirfadeed oo tayo-sare leh. Sidoo kale waxa ay taageertaa qaabab warbaahinta badan iyo saamaynta garaafyada ama dhawaaq oo kala duwan.
Photo Xoogbadane editor sawiro si ay u abuuraan iyo edit tiirarkii. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo bixi saamaynta dheeraad ah iyo qalab si sanamyadooda la shaqeeyaan.
English, Français, Español, Deutsch... Krita 3
Photo The editor naqshadeynta awood badan si ay ula rinjiyeynta digital shaqeeyaan. software waxay leedahay qalab badan oo qoreysa in la abuuro farshaxanka xirfadeed.
العربية, English, Українська, Français... Opera 40.0.2308.90, 41.0.2353.30 beta iyo 42.0.2374 dev
Kadib Browser ayaa si degdeg ah oo caan ah oo ku haboon joogaan online. Software wuxuu taageeraa tiknoolajiyada casriga ah oo uu leeyahay hawlaha waxtar leh.
English, Українська, Français, Español... AIMP 4.11.1841
Ciyaaryahan Media ciyaaryahan audio in ay taageertaa qaabab audio caan ah, waxay leedahay a of saamaynta dhawaaqa, dhisay-in editor Converter iyo tags audio.
العربية, English, Українська, Français... RocketDock 1.3.5
Desktop Quick oo ku haboon helitaanka codsiyada iyo fayl. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u fududeeyaan ay ku daray agabka hordhigo oo ogolaanaya in la ballaariyo fursadaha ay isku xidha daro ah.
English, Français, Español, Deutsch... Ares 3.1.9.4045 iyo 2.4.3
Files Chat Tool inay soo dejisan iyo wadaagaan files ee internet-ka. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad si deg deg ah ka soo dejisan faylasha iyo waxaa ka mid ah ciyaaryahankii ugu gundhig u ciyaaro files warbaahinta.
العربية, English, Français, Español... Internet Explorer 11, 10 iyo 9
Kadib browser The aasaasiga ah ee nidaamka qalliinka ka Microsoft. software waxaa ka mid ah set oo ah qalab u joogtid raaxo online.